नेपाली युवतीको बंगालीसंग रोमान्स गरिएको गोप्य भिडियो क्लिप यसरी सार्बजनिक ! (भिडियो सहित) – Nepali Audio Video
नेपाली युवतीको बंगालीसंग रोमान्स गरिएको गोप्य भिडियो क्लिप यसरी सार्बजनिक ! (भिडियो सहित)
अघिल्लो दिन दिनभर झुमेरा पार्क स्थित समुन्द्रमा सुइमिङ गरेकाले म थकित भएर ओच्छ्यानमा लडिरेहेको थिए । साथीहरु मध्ये केही सपिङ गर्न नजिकैको लुलु मार्केट तर्फ लागेका थिए त कोही नेपाली रेष्टुन्ट तर्फ मःम चाउमिन खान गएका थिए । त्यति बेला म एक्लै कोठामा थिए ।दिउँसोको करिब १२ बज्नै लागेको थियो । बाहिरवाट ढकढक ढकढक ढोकामा आवाज आयो । ‘ ढोका खुल्लै छ’– भने । ढोका खोल्दै एउटी अपरिचित युवतीले नेपालीमै सोधिन – ‘ तपाई नेपाली हो ?’ हजुर भन्न मैले नपाउँदै ढोका ढ्याप्पै बन्द गरेर बाहिरै हराईन । हामी बस्ने घरमा प्राय सबै पुरुषहरुमाथी बस्छन् । महिलाहरु खासै देखिदैनन् ।
मैले बाटोतिर समेत आँखा डुलाएँ । तर ति नेपाली युवती कतै देखिएनन । फेरी ढोका लगाएर कोठाभित्र पसें । एकैछिन पछि सपिङका लागि गएका साथीहरु कोठामा फर्कीए । मैले कोठामा नेपाली खोज्दै ढोका ढकढक्याउने युवतीको बारेमा साथीहरुलाई सुनाए । उनीहरुले खासै महत्व दिएनन् । कोही तास खेल्न बसें । कोही फेसबुकमा व्यस्त भए । म पनि तास खेल्न बसेकाहरुकै आडमा बसेर उनीहरुले नै ल्याइदिएको क्यानजुस पिउँदै तास हेर्न थालें ।
दिउँसोको ३ बज्नै लागेको थियो । कोही समुन्द्र नुहाउन जाउँ भन्दै थिए, त कोही आजमानको बसपार्क घुम्न जाउँ भन्दै थिए । युएईको सातवटा स्टेट मध्ये हामी आजमानमा बस्थ्यौं ।आजमानको बसपार्क परिसर ठूलो र खुल्ला चौर भएकाले धेरैजसो नेपालीहरु त्यो ठाउँमा भेटिन्छन् । हामी आजमानकै बसपार्क जाने निर्णय गर्यो । म कोठावाट बाहिर निस्कीएँ । पल्लोकोठाबाट एकजना झण्डै २२–२३ वर्ष उमेरकी युवती निस्कीदै थिइन ।
कोठा बाहिर बसेका ८–१० जना युवाहरुको भीड त्यस युवती तर्फ केन्द्रीत थियो । पाकिस्तानीहरु बस्ने कोठाबाट निस्कीएकी ति युवती जानि नजानि हिन्दीमा कुरा गर्दै थिइन । आज में थोडा बिजी हुँ, कल आँजाएगें फिर ( आज म थोरै व्यस्त छु भोली आउँछ फेरी ) ।
म अच्चममा परें । उनीहरुबीचको दोहोरो संवाद र ढोकाबाहिर देखिएका युवाहरुको झुण्डको बारेमा खासै बुझिन । युवती त्यहाँबाट निस्कीन् । म ति युवतीले जानि न जानि बोल्दै गरेको हिन्दी र त्यहाँ बसेका युवाहरुको भीड हेरिरहें । बाहिर ति युवतीलाई पिकअप गर्न कालो रङको कार तयारी अवस्थामा थियो । त्यति बेला सम्म बसपार्क जानका लागि सबै साथीहरु कोठाबाट बारिह निस्कीसकेका थिए ।
उनी कालो कपाल माथी सिउँरिदै बाहिरीन । कारमा चढेर उनी कता गइन हामी कसैलाई पनि अतोपत्तो भएन । उनी कार चढेर हिडेलगतै पल्लो कोठामा बस्ने एकजना बंगाली आएर हामी सँगै ति युवतीको नम्बर माग्दै थिए । बल्ल थाह पाए हाम्रो कोठा ढोकाढकढक्याउने तिनै युवती रहिछें । उनी नेपाली हुन ।
पाकिस्तानीको कोठामा यौन प्यास मेटाउन आएकी रहिछन् पाकिस्तानीको कोठा भनेर झुक्कीएर नेपालीको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकी रहिछ । एउटी नेपाली युवती पराई मुलुकमा पराई मुलुककै दर्जनौं युवाहरु सँग बन्द कोठामा बसेर घण्टौं समय विताएको देख्दा खिन्नता महशुस भयो । हामी मन नमिठो बनाई बसपार्कतिर लाग्यौं ।पर्सीपल्ट विहान ११ बजेतिर पश्चिम नेपाल वैतडीका दुईजना साथीहरु कानेखुसी गर्दै कोठाभित्र छिरें । म मोबाइलमा न्यूज पढ्दै थिए । पश्चिम नेपालका तीनजना साथीहरु विगत एक महिनादेखिसँगै कोठामा बस्दै आएका थिए ।
चासो जनाउँदा रहेछन् ।झापाकी सकुन्तला थापाका अनुसार नेपालीहरुले पाएको पीडामा युएइमा बस्ने नेपालीहरुले धेरै सहयोग गर्दै आएका छन् । उद्धार देखि राहत संकलन सम्ममा महिलाहरु अगाडी छन् ।कुनै नेपाली अस्पतालका शैयामा पैसाकै अभावमा मृत्युसँग संघर्ष गर्दै गरेको समाचार प्राप्त भए लगतै सक्रिय संघ संस्था मार्फत सहयोग संकलन गरेर पठाउने गरिएको छ । थापा विगत ८ वर्षदेखि युएइको आजमान शहरमै बस्दै आएकी छिन् ।